AMISOM Oo Mamnuucday In Gudaha Loo Galo Xarunta Xalane – Heemaal News Network
Ilo xog-ogaal ah ayaa Hiiraan Online u sheegay in howlgalka midowga Africa AMISOM uu soo rogay amar ah in aan gudaha loo galin karin xarunta Xalane oo ah saldhiga ugu weyn ciidamada midowga Africa.
Xarunta Xalane ayaa sidoo kale saldhig u ah safaaradaha shisheeye iyo hay’addaha Qaramada Midoobey intooda badan waxaana ku yaala garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.
Lama oga sababta ka danbeysa amarkan laga soo saaray dhaqdhaqaaqa xarunta Xalane laakiin waxaa loo maleynayaa in uu salka ku hayo arrimo la xiriira dhinaca Amniga.
Guddoomiye Jawaari Oo si rasmi ah is casilaadiisa uga hor dhawaaqay Baarlamaanka (Akhriso)
April 12, 2018 Wararka Af Soomaliga Ah
Guddoomiyaha xilka ka degaya ee Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa goor dhow bilaabay khudbadiisa istiqaalada, isagoo ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka. Jawaari ayaa sheegay in maanta aysan jirin qof ama koox guuleysatay […]
Isku Aadka Tartanka Ciyaaraha Maamul Goboleedyada Somaliya Oo la Sameeyay.
Waxaa maanta lagu sameeyay magaalada Muqdisho isku aadka Tartanka Ciyaaraha Maamul goboleedyada oo sanadkii labaad la qabanayo. Wasaaradda Dhalinyarada iyo Isboortiga ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa soo qaban qaabisay Tartankan, iyadoo dib u dejin u sameysay […]